1 - scenografie parchi a tema. I-Scrapinghub:
Uma ungumthuthukisi onobuchwepheshe futhi ubheka ngenkuthalo uhlelo lokusebenza olunamandla lokukhahlela iwebhu, kuzomele uzame ama-80legs. Ithuluzi eliwusizo elithatha amanani amaningi yedatha futhi linikeza ngezinsimbi zokusebenza zokukhwabanisa zewebhu ezisezingeni eliphezulu ngesikhathi esithile. Ngaphezu kwalokho, ama-80legs asebenza ngokushesha futhi angakhansela amasayithi amaningi noma amabhulogi ngemizuzwana nje. Lokhu kuzokuvumela ukuthi ulandele idatha yonke noma ekhethiwe yamasayithi wezindaba nabezenhlalo, ukudla kwe-RSS ne-Atom, kanye namabhulogi wokuhamba ngasese. Kungalondoloza futhi idatha yakho ehleliwe kahle futhi ehleliwe kumafayela e-JSON noma i-Google Amadokhumenti.